Wayne's World သည်ယခုအခါ Hulu သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည် - Netflix သတင်း
ဝိန်းရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား Hulu အပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်
Wayne S World Is Now Hulu
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - မုသာဝါဒီအနည်းငယ်သာရာသီ ၆ လိမ္မော်ရောင်သည် Black Black Season4ဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည်။ Piper Chapman
ဝိန်းကမ္ဘာ့ဖလား Mike Myers နှင့် Dana Carvey တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးယခု Hulu သို့စီးဆင်းသွားပြီဖြစ်သည်။
ဇွန်လ 1 ၏အဖြစ်, ဝိန်းရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား, 1990 ၏ရယ်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခု, ယခု Hulu အပေါ်စီးဆင်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည်!
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ဝိန်းကမ္ဘာ့ဖလား Netflix အပေါ်စီးဆင်းရန်မရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ မေလ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ရုပ်ရှင်သည် streaming service မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် Hulu တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ ဒါက Hulu ပရိသတ်တွေအဘို့ကြီးသောသတင်းပါပဲ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင် Hulu အပေါ် Wayne ရဲ့ကမ္ဘာ့စောင့်ကြည့်ဖို့ Hulu စာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်ရမည်။
သတိပေးမှုတစ်ခုလိုအပ်သောသူများအတွက် Wayne's World သည် Dana Carvey နှင့် Mike Myers သရုပ်ဆောင်ထားသောလူကြိုက်များသော Saturday Night Live ပုံကြမ်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Lorne Michael ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်အတွက်ဇာတ်ညွှန်းကို Mike Myers, Bonnie နှင့် Terry Turner မှရေးသားခဲ့သည်။
ဝိန်း၏ကမ္ဘာ့ဖလား Penelope Spheeris ကညွှန်ကြားခြင်းနှင့် Mike Myers, Dana Carvey, ရော့ Lowe နှင့် Tia Carrere သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုရုပ်ရှင်သည် Wayne (Mike Myers) နှင့် Garth (Dana Carvey), Wayne's World ဟုခေါ်သောအများပြည်သူသုံးဆက်သွယ်ရေးပြပွဲ၏ကြယ်များအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည်။ Benjamin (Rob Lowe) သည် Wayne ၏ World အခွင့်အရေးကိုလိုင်စင်ချပြီးသောအခါ Wayne နှင့် Garth သည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းနောင်တယူပြီးဘင်ဂျမင်ကိုသူတို့၏ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည်။
မကြာခင်မှာပဲဝိန်းကမ္ဘာ့ဖလား Hulu အပေါ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် 50 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပူးပေါင်းလိမ့်မည်! နောက်ထပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတော့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထပ်ထည့်မှာပါ။ Wayne's World ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကျန် Hulu ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုသင်မတွေ့ရှိနိုင်ပါက၊ သင်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ထိုက်တန်သောပြပွဲတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကူညီရန် Hulu မှအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏အဆင့်ကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
kimmy schmidt ရာသီ3ပြန်လည်
Philadelphia တွင်ရာသီ 11 netflix အတွက်နေသာ
သေခြင်းတရားမှတ်ချက် netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ